Abadlali Bokusakaza bukhoma be-HTTP: Izici ezi-5 Odinga Ukuzazi | Martech Zone
Umdlali we-HLS okuyinto eyaziwa nangokuthi Ukusakaza bukhoma kwe-HTTP umthetho olandelwayo wezokuxhumana oyingqondo ye Apple lokho ekuqaleni kwaklanyelwe kuphela amadivayisi we-Apple kodwa ekugcineni kwahambisana namanye amadivayisi. Phakathi kwezici ezahlukahlukene ezincomekayo, ipulatifomu yokusakaza bukhoma ye-HTTP isebenzisa i- ukusakaza okuguqukayo ubuchwepheshe obubheke ababhalisile bokusakaza ngokubanikeza kokubili okufunwayo nezinsizakalo zokusakaza bukhoma kuwo wonke amadivayisi we-Apple.
Kungani sidinga ukufuna ubuchwepheshe beHLS Player?
Ngaphambi kokuthi sifinyelele ebhandeni lokusebenzisa i- Umdlali we-HLS ake siqale sibone izizathu eziyinhloko zokuthi kungani umuntu kufanele ayisebenzise kwasekuqaleni.
Ukuvumelana - Umdlali we-HLS inokutholakala yonke indawo exhasa ngokoqobo zonke iziphequluli kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe ku-Quicktime, Safari, iziphequluli ze-Google Chrome, amapulatifomu e-Microsoft Edge, iLinux neMicrosoft okwenza i-HLS ikhethe kahle phakathi kwabancintisana nabo.
Indlela eqondile - Ukusakazwa kwe-HLS kuletha okuqukethwe komsindo nevidiyo kwi-inthanethi ngendlela engenamthungo. Iningi lesevisi yesidlali sevidiyo esakazwayo etholakala emakethe namuhla kudingeka ukuthi idlule ochungechungeni lokuhamba komsebenzi kusuka ekucushweni kwehadiwe kuye ekufakweni kwesoftware kepha ngakolunye uhlangothi Ukusakaza kwe-HLS ihanjiswa kuwo wonke amadivayisi ngamafayela we-M3U8. Amafayela e-M3U8 aqukethe indawo yefayela yemidiya kwifomu yohlu lwadlalwayo, lapho igcinwa khona njengendlela yefayela emshinini wendawo kanye ne-URL yokusakazwa bukhoma.
Isekela amazwibela avaliwe - Abadlali be-HLS aqukethe amagama-ncazo avaliwe angaphakathi futhi afakiwe ekusakazweni kwezokuthutha kwe-MPEG-2.
Usebenza kanjani umdlali we-HLS?
The Umdlali we-HLS ikakhulu inezinto ezintathu, ingxenye yokuqala iseva, okwesibili ingxenye yokusabalalisa kanti eyokugcina yisoftware yamakhasimende.
Isidlali Sevidiyo se-HLS ngokuyisisekelo ithola okokufaka kwemifudlana yomsindo nevidiyo iyibethela ngamadijithi futhi ifakwa kufomethi ehambisanayo.
Ngokulandelayo engxenyeni yokusabalalisa ebamba uchungechunge lwamaseva we-web yokuqala, ithola isicelo seklayenti bese ibuyiselwa kubo ngesimo samafayela enkomba.
Lapha iklayenti lifunda amafayela enkomba bese licela emuva okuqukethwe okudingekayo okwabiwe ngezigaba. Ngosizo lwe-Content Distribution Network (CDN), zonke lezi zicelo nezimpendulo zifakwa kunqolobane. Lokhu kunciphisa umthwalo wamaseva wewebhu ngezinga elikhulu lapho amanye amaklayenti ecela idatha efanayo.
Izici ze-HLS Player
Isidlali se-HLS yisilinganiso esizenzakalelayo sakho konke ukusakazwa komsindo nevidiyo ngenxa yezici zayo ezahlukahlukene ezithuthukisa umuzwa wokubuka ngaphandle kokubhafa.
Ukusakazwa kwe-Bitrate okuguqukayo - Noma ngabe usebenzisa inethiwekhi enentambo noma engenantambo ubuchwepheshe bokusakazwa kwe-bitrate obuguqukayo buvumela abasebenzisi ukuthi bazijwayeze ikhwalithi yejubane ehlukile ngamandla futhi kuqinisekise ikhwalithi yokusakaza enhle kakhulu ngaphandle kokuphazamiseka. Abadlali be-HLS babhekwa njengomunye wabahamba phambili amapulatifomu okusakaza ividiyo lapho abasebenzisi bangathola khona ikhwalithi ephelele yesithombe ngosizo lwalobu buchwepheshe be-HLS kuma-bitrate aphansi futhi futhi ingaletha okuqukethwe kwevidiyo okusakazwa bukhoma kwe-Html5 ngendlela engenamthungo. Ngakho-ke, ubuchwepheshe be-HLS buhlala buyizinga legolide lokusakazwa bukhoma komsindo kanye nokuqukethwe kwevidiyo.
Multiple Ifomethi Player - Esikhathini nosuku lwanamuhla, isidlali sevidiyo esisakazwayo kufanele sikwazi ukuletha okuqukethwe ngekhwalithi enhle kakhulu noma ngabe amadivayisi angabukwa abaluleke kangakanani. I-HLS idlala inqubo yamanje yokusakaza yokusakazwa kwemidiya esebenzisa ubuchwepheshe besimanje. Ukusakazwa kwe-HLS kuya kuma-Smartphones, amaphilisi, ama-PC kanye namanye amadivayisi kunoma yimaphi amafomethi afana ne-MP4, M3U8 noma i-MPEG dash noma kunoma iyiphi enye ifomethi.
I-HLS ne-Dash eguquguqukayo - I-DASH iyindlela eguquguqukayo yokusakaza eguquguqukayo eyindlalifa yendlela yokusakaza ye-HLS. I-DASH adaptive ihlinzeka ngokusakazwa okujwayelekile kwamazwe ngamazwe okususelwa kuphrothokholi ye-HTTP. Kanye nobuchwepheshe bokusakaza be-HLS ne-Dash Adaptive, okuqukethwe kwabezindaba kungalethwa kusuka kunoma yimaphi amaseva wewebhu ajwayelekile kuyo yonke i-inthanethi.
Ukubhalwa ngekhodi kwe-HD kwe-Multi-bitrate - Ubuchwepheshe be-HLS busebenzisa ngempumelelo ubuchwepheshe be-multi-bitrate encoding lapho umthombo wevidiyo ulungiselelwe futhi ufakwe kuma-bitrate ahlukahlukene futhi usakazwa kwi-Content Development Network ekhethiwe. Lolu hlobo lwe-multi-bitrate noma imifudlana eminingi lwenza lezi zidlali zokusakaza zevidiyo zivele phakathi kwezincintisana nabo. Lokhu futhi kwenza ababukeli bakwazi ukukhetha ukusakaza ngokuya komkhawulokudonsa wabo ngendlela engenamthungo. Isibonelo, uma isibukeli sinomkhawulokudonsa ophakeme, angakhetha i-1080p60 noma ye-bandwidth emaphakathi angakhetha i-480p noma i-360p njalonjalo.
Ukusakazwa kokubethela kwe-HLS - Ngokuyinhloko, ukubethela kwe-HLS kusebenzisa indlela yokubethela ye-AES lapho amafayela evidiyo ebethelwe kusetshenziswa ubuchule obukhethekile. Ukusakazwa kokubethela kwe-HLS kusebenzisa izindlela eziningana eziphumelelayo zokuqinisekisa ukuthi idatha ibethelwe kuyo yonke inqubo ye-HTTPS ngaphandle kokudalula ukhiye ngqo kufayela le-manifest.
Ukudlala Ngokushesha - Isikhathi sokudlala sibalulekile kunoma yisiphi isidlali sevidiyo esisakazwayo nobuchwepheshe be-HLS buhlinzeka ngempumelelo ukudlala ngokushesha ngosizo lwezinsizakalo zewebhu ze-amazon ezinezikhathi zokuphumula ezingekho.
Isidlali se-HLS sinikeza ukusekelwa kokuphela kubasebenzisi ngekhwalithi engenakuphikiswa futhi eqinile phakathi kwenye ifomethi yokusakaza bukhoma. Ukufingqa, ubuchwepheshe be-HLS bokusakaza bunezinzuzo eziningana ezifana nendlela yokusakaza eguquguqukayo, isekela amapulatifomu ahlukahlukene, iqukethe isilinganiso samabhithi amaningi esingalethwa kuwo wonke ama-desktops nakumadivayisi ahlukahlukene weselula ngaphandle komthungo.
Kudlalwe ungomunye wabadlali be-HLS abahamba phambili emakethe namuhla enikeza izici eziphoqayo ezihambisana nobuchwepheshe obuphezulu obunikeza abasebenzisi ulwazi oluhle kakhulu lokubuka. Ngejubane lokudlala ngokushesha, i-Vplay isakaza amavidiyo nokuqukethwe komsindo endaweni evikelekile yokubamba amafu.
Bheka isidlali se-HLS esidlalwayo
Tags: 1080pUkusakazwa kwe-Bitrate okuguqukayoukusakaza okuguqukayoccCdnukudlala kwamakhasimendeamazwibela avaliweinethiwekhi yokusabalalisa okuqukethwedashdash adaptivehls eziguquguqukayoukubethela kwe-hlsukusakazwa kokubethela kwe-hlshls umdlalihttp ukusakaza bukhomabukhoma ukusakazam3u8kubonakalaukufakwa kwekhodi yemidiyaukufaka ikhodi kwe-multi-bitrate hdifomethi yomdlali amaningiizingxenyeukusakazwa bukhoma kwevidiyoukudlala ividiyoi-vplayed